13 Lee, e nwere otu onye+ nke Chineke nke si na Juda gaa Betel dị ka Jehova gwara ya,+ mgbe Jeroboam guzo n’akụkụ ebe ịchụàjà+ isure ihe nsure ọkụ.+
2 O wee kwuo n’oké olu megide ebe ịchụàjà ahụ dị ka Jehova gwara ya, sị: “Ebe ịchụàjà, ebe ịchụàjà, nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Lee! Nwa nwoke a mụụrụ ụlọ Devid, onye aha ya bụ Josaya!+ Ọ ga-egbu ndị nchụàjà nke ebe ndị dị elu n’elu gị bụ́ ndị na-esure ihe nsure ọkụ n’elu gị, ọ ga-akpọkwa ọkpụkpụ ndị mmadụ ọkụ n’elu gị.’”+
3 O wee nye ihe àmà+ n’ụbọchị ahụ, sị: “Nke a bụ ihe àmà nke Jehova kwuru okwu ya: Lee! A ga-eme ka ebe ịchụàjà a tiwaa, ntụ nke ya na abụba gwakọtara bụ́ nke dị n’elu ya ga-awụpụsịkwa.”
4 O wee ruo na ngwa ngwa eze nụrụ okwu onye nke ezi Chineke nke o kwuru n’oké olu megide ebe ịchụàjà ahụ dị na Betel, ozugbo ahụ Jeroboam si n’ebe ịchụàjà ahụ setịpụ aka ya, sị: “Jidenụ ya!”+ Aka ahụ o setịpụrụ wee kpọnwụọ ozugbo, o nweghịkwa ike isere ya.+
5 E mekwara ka ebe ịchụàjà ahụ tiwaa, ntụ nke ya na abụba gwakọtara wee si n’ebe ịchụàjà ahụ wụpụsịa, dị ka ihe àmà ahụ onye nke ezi Chineke nyere si dị, dị ka Jehova gwara ya.+
6 Eze wee zaa onye nke ezi Chineke, sị: “Biko, mee ka obi Jehova bụ́ Chineke gị jụrụ, kpeekwara m ekpere ka e mee ka aka m dịghachi mma.”+ Onye nke ezi Chineke wee mee ka obi Jehova jụrụ,+ e wee mee ka aka eze dị mma, o wee dịrị otú ọ dị na mbụ.+
7 Eze wee sị onye nke ezi Chineke: “Soro m ka anyị gaa n’ụlọ rie ihe,+ ka m nyekwa gị onyinye.”+
8 Ma onye nke ezi Chineke sịrị eze: “I nyegodị m ọkara ụlọ gị+ agaghị m eso gị baa+ iri ihe oriri ma ọ bụ ịṅụ mmiri n’ebe a.
9 N’ihi na otú a ka o nyere m n’iwu dị ka Jehova kwuru, sị, ‘Erila ihe oriri,+ aṅụkwala mmiri, esikwala n’ụzọ i siri gaa laghachi.’”
10 O wee malite isi ụzọ ọzọ lawa, o sighịkwa n’ụzọ o si bịa Betel laghachi.
11 Otu onye amụma meworo agadi+ bi na Betel, ụmụ ya wee bata kọọrọ ya ọrụ niile onye nke ezi Chineke rụrụ na Betel n’ụbọchị ahụ na okwu ọ gwara eze, ha wee kọọrọ ya nna ha.
12 Nna ha wee sị ha: “Olee ụzọ o si lawa?” Ụmụ ya wee gosi ya ụzọ onye nke ezi Chineke nke si Juda bịa si lawa.
13 O wee sị ụmụ ya: “Dokwasịrịnụ m ihe e ji anọkwasị n’ịnyịnya ibu.” Ya mere ha dokwasịịrị ya ihe e ji anọkwasị n’ịnyịnya,+ o wee nọkwasị na ya.
14 O wee chụwa onye nke ezi Chineke ahụ ma hụ ya ka ọ nọ ọdụ n’okpuru nnukwu osisi.+ O wee sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ onye nke ezi Chineke nke si na Juda bịa?”+ o wee zaa, sị: “Ọ bụ m.”
15 O wee sị ya: “Soro m gaa n’ụlọ rie nri.”
16 Ma ọ sịrị: “Enweghị m ike iso gị laghachi ma ọ bụ soro gị baa, apụghịkwa m iso gị rie nri ma ọ bụ ṅụọ mmiri n’ebe a.+
17 N’ihi na a gwawo m site n’okwu Jehova,+ sị, ‘Erila nri, aṅụkwala mmiri n’ebe ahụ. Esikwala n’ụzọ i si gaa laghachi.’”+
18 O wee sị ya: “Mụ onwe m bụkwa onye amụma dị ka gị, otu mmụọ ozi+ gwakwara m okwu dị ka Jehova gwara ya, sị, ‘Mee ka o soro gị lọghachi n’ụlọ gị ka o wee rie nri ma ṅụọ mmiri.’” (Ọ ghọgburu ya.)+
19 Ya mere, o sooro ya laghachi ka o wee rie nri n’ụlọ ya ma ṅụọ mmiri.+
20 O wee ruo ka ha nọ ala na tebụl na okwu+ Jehova ruru onye amụma ahụ ntị bụ́ onye kpọghachitere ya;
21 o wee malite ịgwa onye nke ezi Chineke ahụ nke si na Juda bịa n’oké olu, sị: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘N’ihi na i nupụrụ isi+ n’iwu Jehova ma ghara idebe ihe Jehova bụ́ Chineke gị nyere gị n’iwu,+
22 kama nke ahụ, ị laghachiri ka i wee rie nri ma ṅụọ mmiri n’ebe ahụ nke ọ gwara gị banyere ya, sị: “Erila nri, aṅụkwala mmiri,” ozu gị agaghị abata n’ebe ili ozu nke nna nna gị hà.’”+
23 O wee ruo mgbe o richara nri nakwa mgbe ọ ṅụsịrị ihe ọṅụṅụ na o dokwasịịrị ya ihe e ji anọkwasị n’ịnyịnya ibu ozugbo, ya bụ, onye amụma ahụ ọ kpọghachitere.
24 O wee lawa. E mesịa, ọdụm+ hụrụ ya n’ụzọ wee gbuo ya,+ e wee tụpụ ozu ya n’ụzọ. Ịnyịnya ibu ahụ guzo n’akụkụ ya, ọdụm ahụ guzokwa n’akụkụ ozu ahụ.
25 E nwekwara ndị na-agafe, ha wee hụ ozu ahụ a tụpụrụ n’okporo ụzọ na ọdụm guzo n’akụkụ ozu ahụ. Ha wee bata kwuo banyere ya n’obodo nke onye amụma ahụ meworo agadi bi na ya.
26 Mgbe onye amụma ahụ nke kpọghachitere ya nụrụ banyere ya, o kwuru ozugbo ahụ, sị: “Ọ bụ onye nke ezi Chineke ahụ nke nupụrụ isi n’iwu Jehova;+ Jehova wee nyefee ya n’aka ọdụm, ka o wee dọgbuo ya, dị ka okwu Jehova gwara ya si dị.”+
27 O wee gwa ụmụ ya, sị, “Dokwasịrịnụ m ihe e ji anọkwasị n’ịnyịnya ibu.” Ha wee dokwasị ya.+
28 O wee gawa ma hụ ozu ya ka a tụpụrụ ya n’okporo ụzọ nakwa ịnyịnya ibu ahụ na ọdụm ahụ ka ha guzo n’akụkụ ozu ahụ. Ọdụm ahụ erighị ozu ahụ, ọ dọgbughịkwa ịnyịnya ibu ahụ.+
29 Onye amụma ahụ wee bulite ozu onye nke ezi Chineke ahụ ma dọkwasị ya n’ịnyịnya ibu ahụ wee bughachi ya azụ. Onye amụma ahụ meworo agadi wee si otú a bata n’obodo nke ya ịkwara ya ákwá arịrị na ili ya.
30 Ya mere, ọ dọbara ozu ya n’ili nke aka ya; ha wee na-akwara ya ákwá arịrị, sị:+ “Ewoo, nwanne m nwoke!”
31 O wee ruo mgbe o lisịrị ya na ọ gwara ụmụ ya, sị: “Mgbe m nwụrụ, unu ga-eli m n’ili ahụ e liri onye nke ezi Chineke ahụ. Wụsanụ ọkpụkpụ m n’akụkụ ọkpụkpụ nke ya.+
32 N’ihi na okwu ahụ o kwuru n’oké olu, dị ka ihe Jehova kwuru si dị, nke ga-eme ebe ịchụàjà+ ahụ dị na Betel na ụlọ niile dị n’ebe ndị dị elu+ n’obodo ndị dị na Sameria,+ ga-emezu.”+
33 Mgbe ihe a mesịrị, Jeroboam ahapụghị ụzọ ọjọọ ya, kama ọ malitere ọzọ isi ná ndị nkịtị na-ahọrọ ndị ọ na-eme ndị nchụàjà nke ebe ndị dị elu.+ Onye chọọ, ya enye ya ikike,+ sị: “Ka ọ ghọọ otu n’ime ndị nchụàjà nke ebe ndị dị elu.”
34 Ihe a wee ghọọ ihe mere ka ezinụlọ Jeroboam+ mehie, bụrụkwa ihe ga-eme ka e kpochapụ ha ma laa ha n’iyi n’elu ala.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D11%26Chapter%3D13%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl